Dowlada Kenya oo shaacisay inta maalmood ee lagu dhisayo Darbiga Xadka Somalia iyo Kenya | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dowlada Kenya oo shaacisay inta maalmood ee lagu dhisayo Darbiga Xadka Somalia iyo Kenya
Dowlada Kenya ayaa wada qorshe lagu dar dar galinayo dhismaha darbiga laga dhisayo xadka Soomaaliya iyo Kenya wadaagaan, Kenya ayaana aaminsan in dhismaha darbigan uu yareenayo weerarada dagaalyahanada Al Shabaab ku qaadaan gudaha dalkaasi.
Guddoomiyaha Gobolka Mandheera Fredrick Shisia ayaa sheegay in dib loo bilaabi doono dhismaha darbiga laga dhisayo xadka kadib markii ay kordheen weerarada Al Shabaab ka geesanayaan gudaha dalka Kenya.
Fredrick Shisia ayaa xusay in la dar dar galinayo dhismaha darbiga oo gaaraya 30 km ,waxa uuna tilmaamay in ay rajeenayaan in dhismahaasi lasoo gabo gabeeyo marka la gaaro bisha janaayo ee sanadka soo socda.
“Dhismaha derbiga lagu adkeenayo amaaanka dalka Kenya deg deg ayaa lagu bilaabi doonaa si amaanka loo xaqiijiyo, dhismaha darbiga waxaan ku dhameystiri doonaa 75 maalmood laga bilaabo Maanta,” ayuu yiri Fredrick Shisia.
Xarakada Al Shabaab ayaa kordhisay weerarada ay ka geesanayaan gudaha dalka Kenya, waxaana weeraradii ugu dambeeyay oo ka dhacay magaalada Mandheera lagu dilay ku dhawaad 20 qof oo Kenyan ah.